Aịzaya 48 Baịbụl Nsụgharị Ụwa Ọhụrụ nke Dị n'Ịntanet
A baara ndị Izrel mba, meekwa ka ha dị ọcha (1-11)
Jehova ga-emesi Babịlọn ike (12-16a)
Chineke na-akụzi ihe bara uru (16b-19)
“Sinụ na Babịlọn pụọ” (20-22)
48 Nụrụnụ ihe a, ndị ezinụlọ Jekọb,Ndị na-aza aha Izrel,+Ndị si n’ezinụlọ Juda,*Ndị na-eji aha Jehova aṅụ iyi,+Ndị na-eto Chineke Izrel,Ma o sighị ha n’obi. Ha anaghịkwa eme ezi omume.+ 2 Ha na-asị na ha si n’obodo nsọ.+ Ha na-achọkwa ka Chineke Izrel,Onye aha ya bụ Jehova nke ụsụụ ndị agha, nyere ha aka.+ 3 “O teela m gwara unu ihe ndị gara aga.* M ji ọnụ m gwa unu ha. M kwuru ha ka a nụ ha.+ Na mberede ka m mere ihe m kwuru na m ga-eme.+ 4 N’ihi na m ma na unu bụ ekwe ekwe. Unu kpọchiri obi unu,* na-akpọkwa ekwo nkụ.*+ 5 O teela m gwara unu ihe ndị a. Tupu ha emee, m mere ka unu nụ ha,Ka unu ghara ịsị, ‘Ọ bụ arụsị anyị mere ihe a. Ọ bụ arụsị anyị a pịrị apị na nke a kpụrụ akpụ kwuru ka ihe a mee.’ 6 Unu anụla ihe niile, hụkwa ha. Ọ̀ bụ na unu agaghị akọsa ha?+ Si ugbu a gawa, m ga na-akọziri unu ihe ọhụrụ,+Ihe ndị e zoro nke ọma unu na-amaghị. 7 Ugbu a ka ha na-eme.* O tebeghị aka,Ha bụ ihe unu na-anụtụbeghị tupu taa,Ka unu ghara ịsị, ‘Anyị dị mbụ mara ha.’ 8 N’eziokwu, o nwebeghị mgbe unu chọrọ ịnụ ya.+ Unu aghọtaghịkwa ya,O teekwala ntị unu kpọchiri akpọchi. Ama m na unu na-aghọ ncha n’aghụghọ.+ Unu bụkwa ndị mmehie kemgbe a mụrụ unu.+ 9 Ma n’ihi aha m, m ga-akwụsị iwe m na-ewe.+ M ga-ejide onwe m ka e wee nye m otuto. M gaghịkwa ebibi unu.+ 10 Anụchaala m gị, ma ọ bụghị dị ka e si anụcha ọlaọcha.+ Ahapụrụ m gị ka ị taa ahụhụ, si otú ahụ nụchaa* gị otú e si eji oké ọkụ agbaze ihe.+ 11 N’eziokwu, m na-eme ihe a n’ihi aha m.+ Olee otú m ga-esi kwe ka e mebie aha m?+ Anaghị m enye onye ọzọ otuto e kwesịrị inye m. 12 Jekọb, gee m ntị. Izrel, bụ́ onye m họọrọ, geekwa m ntị. Anaghị m agbanwe agbanwe.+ Abụ m onye mbụ, bụrụkwa onye ikpeazụ.+ 13 Eji m aka m tọọ ntọala ụwa,+Jirikwa m aka nri m gbasaa eluigwe ka ákwà.+ M na-akpọ ha ka ha pụtakọta ọnụ. 14 Unu niile, zukọtanụ ma gee ntị. Ò nwere chi ọ bụla n’ime ha kwuru gbasara ihe ndị a? Onye* mụnwa bụ́ Jehova hụrụ n’anya+Ga-eme Babịlọn ihe ọ bụla dị mụ mma.+ Ọ ga-ejikwa aka ya dị ike mesie ndị Kaldia ike.+ 15 Ekwuola m ihe m kwuru, akpọọkwala m ya.+ Akpọbatala m ya. M ga-emekwa ka ihe gaziere ya.+ 16 Bịanụ m nso, nụrụ ihe a. Malite ná mbido, m na-ekwu ihe m na-ekwu n’ihu ọha, ọ bụghị na nzuzo.+ Mgbe ihe e kwuru na ọ ga-eme mere, anọ m ya.” Ma ugbu a, Ọkaakaa Onyenwe anyị Jehova ezipụla m, nyekwa m* mmụọ ya. 17 Jehova, Onye Mgbapụta gị na Onye Nsọ Izrel, kwuru,+ sị: “Mụnwa, bụ́ Jehova, bụ Chineke gị. Ọ bụ m na-akụziri gị otú ị ga-esi baara onwe gị uru,+Na-ezikwa gị ụzọ i kwesịrị ịna-eso.+ 18 Biko, na-eme ihe m nyere n’iwu.+ Ọ bụrụ na ị na-eme ya, udo ị ga-enwe ga-aha ka osimiri,+Ị gaghịkwa akwụsị ime ezi omume otú ahụ ebili mmiri na-anaghị akwụsị akwụsị n’oké osimiri.+ 19 Ụmụ* gị na ndị si n’ezinụlọ gịGa-adị ọtụtụ ka ájá.+ E nweghịkwa ihe ga-eme ka e hichapụ aha ha.” 20 Sinụ na Babịlọn pụọ.+ Sinụ n’obodo ndị Kaldia gbapụ. Na-enwenụ aṅụrị ka unu na-akọsa ya. Kọsaanụ ya.+ Kwuonụ gbasara ya n’ebe ụwa sọtụrụ.+ Kwuonụ, sị: “Jehova agbapụtala Jekọb ohu ya.+ 21 Akpịrị akpọghị ha nkụ mgbe o du ha gafee ọzara.+ O mere ka mmiri si n’oké nkume gbapụtara ha. Ọ gbawara oké nkume, mmiri agbapụtawa.”+ 22 Jehova kwuru, sị: “Udo agaghị adịrị ndị ajọ omume.”+
^ Na Hibru, “Ndị si na mmiri Juda pụta.”
^ Na Hibru, “ihe ndị mbụ.”
^ Na Hibru, “Olu unu bụ akwara ígwè.”
^ Na Hibru, “egedege ihu unu bụkwa ọla kọpa.”
^ Na Hibru, “ka e kere ha.”
^ Ma ọ bụ “nyochaa.” O nwere ike ịbụ, “họrọ.”
^ Ya bụ, Saịrọs.
^ Ma ọ bụ “ezipụla mụ na.”